Streetball - uhlobo ezemidlalo, okuyinto eyavela basketball. Abantu abaningi ngephutha sikholelwe kungcono nje basketball emgwaqweni. Lapha, kanye nezimiso ezijwayelekile ngobuciko izakhi ezihlangene show futhi ezihlukahlukene izinto, ezize nge isiko emgwaqweni futhi hip-hop. Ake sibone ukuthi yini emgwaqweni ibhola, imithetho okuzokwenza manje makwazeke kini.
Playground futhi iqembu
Streetball Area ncamashi nengxenye ye-basketball. Lihlanganisa khulula nokujikijela umugqa, arc futhi isikhala Ukukhetha. Ngo umdlalo amaqembu amabili iqhaza, lapho kuwo ngamunye abantu 4. abadlali Three inkantolo nokukodwa ebhentshini. Ngokuvamile, inqubekela phambili komdlalo kulandelwa elinye ijaji, ungunobhala owaloba isikhathi. Yiqiniso, kungcono uma umdlalo uyokhonza abahluleli ababili. By the way, imfundo Amazing kwenzeka kanyekanye, kanti lo okunguyena kuzovula umdlalo, kukhethwe ngumuntu flip uhlamvu lwemali.
Mhlawumbe omunye izikhathi ezibalulekile umdlalo - Amaphuzu. Ibhola abadlali kukora ku ingaphakathi arc, lulinganiselwe amaphuzu eyodwa, futhi kusukela ngaphandle - amaphuzu amabili. Ukuze nokujikijela ngamunye khulula owanikhipha umphumela, iqembu uthola iphuzu elilodwa.
Esikhathini esiningi umdlalo kuyaqabukela imizuzu engaphezu kuka-10. Kufanele ukwethula umqondo omusha: a athi 'okuhlanzekile' 'ezingcolile "umdlalo, okuyinto kunqunywa ngumahluleli noma umhleli mqhudelwano.
isikhathi "Bangempela" ichazwa kanje: iwashi uzoyeka ngokushesha nje ibhola uyaphuma noma ngasiphi isizathu. Futhi, "ezingcolile" Akupheli, ngaphandle isikhathi nasemigwaqweni kanye ngomzuzu wokugcina. Uma womabili amaqembu abakwazanga ukuyikhipha ukunqoba, kunikezelwe isikhathi esengeziwe. Ithimba lakhe ngokuvamile iqala okuphambene lowo owayephatha ukudlala ibhola ekuqaleni. Abadlali amaphuzu extra time 2 amaphuzu, fikisa ahlula. Futhi, uma isikhathi esimisiwe ngaphambi abadlali awaveli on inkantolo, usawoti.
Amaphutha kanye khulula Ufaka
Ukuze uqale nge sikhumbula ukuthi Amaphutha - ukuhlukumeza wemithetho. ezine kuphela Amaphutha e team play akuyona yisigwebo khulula Ufaka, futhi ngamunye Umdlali ngamunye alunamkhawulo. Ukwephulwa ngesikhathi nokujikijela kusukela arc bejeziswa nge fike bhaklu elinye iqembu, nangaphandle arc - amabili Ufaka. Ithimba, eye isiphelile inani Amaphutha, uyophinde bajeziswe ngumuntu isigwebo.
Streetball - umdlalo ngawo exhunywe imizuzwana 16. Le nombolo wafika lapha ngengozi. Abadlali ethimba ncamashi 16 imizuzwana ukuqhuba uhlaselo. Lesi sikhathi kusuka ngesikhathi lo mgadli uthola ibhola ezandleni zakhe. Uma isayithi kungekho esiphikisayo, unobhala yaphakamisela isandla sayo. Lesi senzo sisho ukuthi ithimba has imizuzwana 5 kuphela kwesokunxele ukuqedela kuhlasela.
Uma ibhola esikubhasikidi, umdlali aphuthelwe iqembu iqala ukuba dribble ibhola noma balidlulisele ethimbeni naye ngqo ngaphansi kwesitsha. Bephonsa ibhola kuthathwa njengesibikezelo esiyiso engcolile.
Uma roll is hhayi kuqeda ngokufaka ubhasikidi, ibhola ucosha imiyalo ababulawa ukuhlaselwa, futhi akawuthathi ngaphandle arc. Kodwa uma ibhola uyangenelela iqembu lidlala ukuzivikela, kufanele uthole ibhola.
Uma kwakuba khona ukulahlekelwa noma ukucabhela, umdlali kufanele ulethe ibhola ngemuva arc by yokudlulisela noma beqhuba. By the way, ukwenza lokhu, inyawo ezimbili nje phumani ngemuva arc. Uma ijaji ecubungula isimo impikiswano, ibhola uya ethimbeni ekuvikeleni.
Ithimba ngalinye ungathola isikhathi ngemizuzwana engu-30.
Ithimba edume kakhulu
Streetball - ngumdlalo uyikhazimulisile ithimba AND1. Kuhlanganisa kuphela best emgwaqweni abadlali ukuhamba emhlabeni wonke futhi njalo ukuqoqa amahholo okugcwele izinkundla, izinkantolo emgwaqweni. Kubo, ibhola emgwaqweni - lokho ekuphileni. Basuke zihlukaniswa hhayi kuphela amaqhinga kakhulu kodwa ukuqonda ngokuphelele phakathi nomunye. Wonke umdlali ihlukile, futhi ukusebenzisana yabo ifana Okuyınqo, ehlelwe kahle futhi zilethwe umbukiso abaningi ufuna ukuvakashela. Minyaka yonke benza uhambo izindawo zaseYurophu, eMelika nase-Asia.
Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi yokuthi le nsizwa Skinny waya ngenye yezindawo ezidumile futhi waqala ukuba ngivuke nge ibhola izinto nje zicatshangwe. Igama lakhe kwakungu-Bheka Alston. ngokushesha Waba Luhambo wangempela nale ndawo, abulawe yayo lamaqhinga ngokuphelele amazed wonke umuntu. Ngokushesha ividiyo zezikhathi wakhe omkhulu kwakulokhu kule nkampani abasha AND1, okuyinto kuveza shape. Leteyipu isibe isicelo mahhala amateki yenkampani. Ngakho mayelana umfana ngezandla emangalisayo zonke oyifundile kuzo, nokuthi inkampani waqaphela ukuthi izinkanyezi unacknowledged - lokho ayekudinga. Bebafuna izinkanyezi, labo ibhola emgwaqweni - umdlalo eliyingqayizivele, futhi wathola. Ngokushesha impela kwafumaniseka ukuthi babe yizinkulungwane uPhillip Atlanta futhi Allen, we-Philadelphia. Into wavuka nge ibhola, lezi guys kuthiwa shí ukushaqeka wonke umuntu. Le nkampani ngokushesha usayine isivumelwano nabo base bekhululwa cassette esilandelayo. Kwaba ngemva kwakhe zonke ukhuluma ngani Streetball AND1, futhi ngokukhethekile. Zonke emgwaqweni evele abadlali bafuna ukuthola ukuma inkampani manje edume. Yiqiniso, zikhona kwalabo abakholelwa ukuthi Streetball - lokhu akukona isekisi hhayi namasu, kodwa abalandeli bale nhlangano nakakhulu. Kunoma ikuphi, akukho ngabandayo.
Blake Griffin: Biography, izibalo umsebenzi
Ukufaka ehlukile inethiwekhi elementi iphrinta yenethiwekhi